विवेक कुमार ठाकुर प्रकाशित: २०७५-१२-१६ गते
२४ डिसेम्बर १९९९ का दिन नै नेपालले त्यस्तो कदम उठाउनुपथ्र्यो, किनकी छिमेकी देशको ‘प्यासेन्जर एयरक्राफ्ट’ आफ्नै भूमिबाट अपहरित भएको थियो।
पाकिस्तानको खुफिया संस्था आइएसआईको समर्थन प्राप्त आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मदले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हाईज्याक गरेको विमानलाई भारतले चर्को मूल्य चुकाउँदै जब अफगानिस्तानको कान्दाहारबाट फिर्ता ल्यायो, तबदेखि छिमेकीको सुरक्षा चासोको घानमा नेपाल कसरी पिसियो, जगजाहेर छ।
क्षेत्रीय संगठनभित्रै दोहोरो चरित्र देखाइरहेको पाकिस्तानलाई अब सार्कले कतिञ्जेलसम्म थेगिरहने? वा सार्वभौम सदस्य राष्ट्रले कतिन्जेल आतंकवादको सृष्टिकर्तालाई बोकेर अघि बढिरहने? सार्कलाई निरन्तरता दिने हो भने सदस्य राष्ट्रहरुले तत्काल पाकिस्तानको सदस्यता र भू,िमकाबारे छिनोफानो गर्नुपर्छ।
नागरिकले राष्ट्रप्रेम र नीति निर्माताले सन्तुलित कुटनीतिमा जति ध्यान दिनुपर्छ, मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थितीका आधारमा छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे त्यति नै संवेदनशील हुनुपर्छ। उरालिएका चर्का राष्ट्रवादी जार्गनमा फसिरहेको नेपालले दक्षिण एसियामा फैलिरहेको आतंकवादलाई बेलैमा चिरफार गर्नतर्फ नलागे यसको बाछिटामात्र होइन, भेलले नै हामीलाई दुःख दिन सक्छ।